Carl Bild oo ka hadlay xaaladda dalka Masar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carl Bild oo ka hadlay xaaladda dalka Masar
La daabacay onsdag 14 augusti 2013 kl 14.05
Waxaa kugu dhalanaya rajo xumo kolka aad aragto sida dhibaatooyinku uga faafayaan magaalada Qaahira oo ugu faafayaan goobo kale ee dalka ka mid ah, sidaa waxaa sheegay wasiirka arrimmaha dibadda ee dalkan Iswiidhen Carl Bildt oo ka warramayay warar sheegaya iney ugu yaraan 94 ruux ku geeriyoodeen magaalada qaahira.
Middaasi oo ka dambeeyay iska horimaad ka dhacey goobtii ey ku sugnaayeen banaanbaxeyaal taageersan madax-weynihii xukunka laga qaadey Mursi oo ey maanta isku dayeen iney dadka ka baneeyaan ciidammada ammaanka ee dalkaasi oo ka amar qaata dawladda ku meelgaarka ee Masar.
- Farriimaha dalkaa ka imaneya ayaannu ku heynaa indho waaweyn - maxaa ka dhalan kara. Waxaa caddaatey iney gacan sarreeyeen kooxihii dawladda ee doonayey in xoog wax lagu xaliyo, waxaana kordhay halistii laga qabey in dhibaatooyinku sii faafaan. Waxaa iminka na soo gaareya warar sheegaya in weerarro lagu qaadey kaniisado ku yaala tusaale ahaan goobo kale oo Maras ka tirsan. Waa xaalad marka laga niyad jabo.
Ma la filayaa in midowga EU uu tallaabo qaado, goormaase la filayaa?
- Waxaanu leenahey suurtagallo aan sidaa u weyneyn. Waa in la ogsoonaado in xaaladda Masar ey inta badan ku socoto dhabbo u gaar ah. Haddii aan wadahadal la dooneyn wey nagu adkaaneysaa inaan annagu ka dhex dhalino. Hase yeeshee waxaan isku dayeynaa inaan ku celcelino in dhabbada keliya ee xal lagu gaari tahaa tahay in tallaabo dib loo qaado - in wadahadal la furo sidii xal siyaasadeed loo heli lahaa. Waxaa iminka horay loo qaadey tallaabo xaaladda sii cakirin karta, sida uu sheegay Carl Bildt.